Salaamanews » Wafdiga Madaxweynaha Soomaaliya oo ku soo wajahan Muqdisho
Home » Warar Wafdiga Madaxweynaha Soomaaliya oo ku soo wajahan Muqdisho Print - Daabace: SalaamaNews - Dec 8th, 2012 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Madaxweyne Xasan Sheekh oo si kulul uga hadlay suuq xumida SoomaaliyaPuntland oo furtay xarun dalxiis (Sawirro)Kooxo hubeysan oo dilay gudoomiyihii odayaasha HiiraanRa’isal wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax oo 30 sano kadib tagay Shabeellaha hooseProf. Jawaari oo ballan qaaday waxqabad ay la imaan doonaan baarlamaanka
(Salaamanews)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Shiikh Maxamuud, ayaa si rasmi ah u soo gaba gabeeyay safar maalmo kooban qaatay uu ku tagay wadanka turkiga oo heshiis kula soo saxiixday madaxda wadankaasi.
Madaxweyne Xasan Shiikh iyo wafdi sare uu hogaaminayay ayaa Sabtida maanta ah ku soo wajahan magaalada Muqdisho, waxaana intii ay joogeen dalka Turkiga ay kulamo la soo qaateen madaxweynaha iyo ra’isal wasaaraha dalka Turkiga.
Wafdiga madaxweynaha ayaa lagu wadaa in lagu soo dhaweeyo Muqdisho, waxaana garoonka Muqdisho ka socota qaban qaabo xoogan oo lagu soo dhaweynayo wafdi Mr. Xasan Shiikh.
Madaxweynaha oo markuu soo gaba gabeeyay kadib la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in safarkiisa uu soo dhamaaday, isagoo amaanay heshiis ay kala saxiixdeen xukuumadaha Istanbuul iyo Muqdisho.
“Wafdigeyga iyo aniga waxaan soo dhameynay safarkii aan ku joognay Turkiga, waxaan rajeyneynaa inaan ku soo laabanno dalka, waxaana heshiis kala saxiixday labada xukuumadood ee Muqdisho, iyo Istanbuul” ayuu yiri Mr. Xasan Shiikh.
Warar aan la hubin ayaa muujinaya in ay dhici karto in xubno kamid ah wafdiga madaxweynaha ay tagaan ama ku haraan wadamada ku dhaw Soomaaliya, iyadoo ay dhici karto in madaxweyne Xasan Shiikh uu gaaro dalka Kenya.
Info@salaamanews.com Tags: warar « Qoraalkii HoreNairobi’s Somali area Eastleigh hit by fatal blast	Qoraalka Xiga »Xukuumadda Soomaaliya oo eedeysay hey’ado hoostaga qaramada midoobay (Warsaxaafadeed)	Halkan Hoose ku Jawaab